avylavitra · Oktobra 2011 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Oktobra, 2011
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Oktobra, 2011
Mediam-bahoaka 31 Oktobra 2011
Ny ohabolana dia andian-teny fohy avy amin'ny fahendrena eo amin'ny fiarahamonina. Any Mali, maro amin'ireny fomba fiteny ireny no hita amin'ny teny Bambara, izay teny mbe mapahazo indrindra ao amin'ny firenena, indrindra fa any amin'ny faritr'i Ségou. Eto no idiran'ny tetikasan'ny Rising Voices , Ségou Villages Connection mampianatra ny mponina ambanivohitra mba hampiasa ny aterineto hizaran'izy ireo ny tantarany. Na izany aza, hita ihany koa ireny ohabolana ireny any anaty resadresaka amin'ny bilaogy samihafa sy ny twitter any.
Mediam-bahoaka 28 Oktobra 2011
Hiper-barrio 26 Oktobra 2011
Olona notohanan'ny Rising Voices fahiny tamin'ny HiperBarrio any Medellín, Kolombia no manohy ny fandraisan'anjarany amin'ny asan'ny media mirotsaka an-tsehatra ao amin'ny manodidina an'i La Loma. Ho fanabeazam-boho ny asa vitan'izy ireo tany aloha nandrakitra an-tsarintany ny vondrom-piarahamoniny niaraka tamin'ny Open Street Maps, ny tariky ny ConVerGentes dia nanapa-kevitra ny hitrandraka ny tontolon'ny fanaovana sarintany avy amin'ny alalan'ny balaonina.
Namoaka vokatra somary efa nampoizina ihany ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tao Arzantina: ny nahavoafidy indray ny filoha amperinasa, Cristina Fernández de Kirchner. Ilay fandresena midadasika be dia nandrisika ireo bilaogera hanadihady ny toe-draharaha politika.